Lacagaha la lunsado oo aan dib loo arag - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lacagaha la lunsado oo aan dib loo arag
La daabacay måndag 5 augusti 2013 kl 09.12
Lacago badan oo la xiriira dembiyada dalka ka dhaca ayaan u suurtagelin boliiska in ay soo ururiyaan. Tusaale ahaa, sannadkii la soo dhaafay waxay boliiska qaybtiisa la dagaalanka dembiyada dhaqaalaha la xiriira soo ururiyeen ama dib u heleen lacag u dhiganta 2.2 milyan, taas oo noqoneysa hoos u dhaca marka la barbardhigo sannadkii ka horreeyey. Per Geijer oo ururka Svensk Handel u qaabbilsan ammaanka ayaa sheegay in sababtu tahay in uusan boliisku lahayn kartidii looga baahnaa.
- Taas waxaa iyadoo aqoonla’aan xirfadeed iyo iyadoo aysan jirin fursado loo isticmaalo aqoonta loo baahan yahay. Run ahaantii waxaa la oran karaa in ay jiraan sababo aan mudnaanta loo siin sabagalka lacagahaas la lunsaday. Sharciguna awood inoo ma siinaayo habkii aan u hawlgeli lahayn, ayuu yiri Per Geijer.
Sannad walba waxaa jebabka dad dembiilayaal ah gala malaayiin lacag ah. Qayb yar oo lacagahaas ka mid ah ayaana dib ugu soo noqda ciddii laga lunsaday ama khasnadda dowladda. Xisaab uu sameeyey ururka ganacsiga oo lagu magacaabo Svensk Handel waxaa lagu muujiyey in shirkadaha Iswiidhen ay sannadkii hore ka lumeen lacag gaareysa 1.2 milyan oo warqado beenbeen ah lagu qaatay.